Tsiandopy Jacky : Nisy namono tao an-tranony -
AccueilRaharaham-pirenenaTsiandopy Jacky : Nisy namono tao an-tranony
Tsiandopy Jacky : Nisy namono tao an-tranony
Hagagana ny an’ny rehetra raha naheno omaly maraina, tokony ho tamin’ny 08 ora sy sasany fa hita faty tao amin’ny trano fonenany, teny Andrefan’ny Bout de Piste Ivato ny minisitry ny FOP teo aloha, Tsiandopy Jacky Mahafaly. Raha ny voalaza, dia ny zanany lahy sy ny saoferany haka lakile no nahita azy efa nifatotra teo amin’ny vozony sy ny tanany ary ny tongony. Rehefa nojerena dia tsy nisy aina intsony ity minisitra teo aloha ity, ary voaporofo tokoa fa nisy namono izy. “Tao amin’ny efitranony manokana, tany ambony rihana ary teo anelanelan’ny rindrina sy ny fandriana no nahitana ny razana. Tamin’ny fitsirihina natao, dia nisy ratra kely teo amin’ny faritry ny tarehiny. Tsy nahitana rà kosa teo amin’ny manodidina”, hoy ny fanamarinam-baovao azo avy amin’ny solontenan’ny zandarimariam-pirenena. Araka ny fanomezam-baovao ihany dia mbola nifandray tamin’ny vady aman-janany ihany koa izy talohan’ny nahafatesany. Tsy mbola fantatra kosa ny vola very sy ny entana hafa tao amin’io toerana nahitana ny vata mangatsiakany io, fa raha ny fantatra, dia ny firavaka teny an-tanany sy teny am-bozonany no tsy hita popoka intsony . Raha ny angom-baovao hatrany dia tsy nahenoana poa-basy na tabataba tao amin’ity trano ity fa tao anatin’ny fanginana tanteraka no nanatanterahan’ireo nahavanon-doza ny asa ratsiny. Tonga teny an-toerana moa ny zandary avy eny Ambohidratrimo nijery ifotony ny zava-nisy taorian’ny fampandrenesana nataon’ny fianakaviany, ary efa mandeha ihany koa ny famotorana mahakasika ity raharaha ity.
Araka ny loharanom-baovao ihany, dia fantatra fa misy alika masiaka tao amin’ny tanànan’ity minisitra teo aloha ity. Nampametra-panontaniana ny fianakaviany, noho izany, ny fomba nidiran’ireo olon-dratsy tao an-tanàna satria raha ny tatitra azo hatrany dia mifefy tsara ary mihidy be ihany koa ny tanàna misy azy. Raha ny tombatombana dia olona mahafantatra azy sy io tanàna io ihany no nahavanon-doza saingy ho fantatra amin’ny alalan’ny fanadihadiana izay hataon’ireo zandary ny fahamarinan’izany na tsia. Vinavinaina ho niditra tao an-tranony talohan’ny nahatongavany, ny alahady alina ihany koa ireo olon-dratsy nandatsaka ny ainy. Nentina natao “autopsie” teny amin’ny hopitaly manara-penitra etsy Andohatapenaka moa ny vata-mangatsiakan’i Tsiandopy Jacky Mahafaly omaly tolakandro. Avy any Belamo, Distrikan’i Vohémar ny fiavian’i Tsiandopy Jacky Mahafaly, ary maro ny andraikitra nosahaniny teto amin’ny firenena. Ankoatran’ny naha-Minisitry ny Asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy azy, tamin’ny fitondran-dRavalomanana Marc, dia efa mpikambana tao amin’ny antoko Tim ihany koa izy. Efa Senateran’i Madagasikara voafidy tany amin’ny faritra SAVA sy efa filohan’ny SIEM (Syndicat des Inspecteurs généraux d’Etat de Madagascar) ny tenany. Efa PDS sy mpikambana tao amin’ny filankevi-pitantanan’ny Oniversiten’Antsiranana ihany koa i Tsiandopy Jacky Mahafaly. Efa “Autorité de l’Etat” tamin’ny tetezamita ihany koa izy. Mpanao politikan’ny Tim roa izany izao no namoy ny ainy tao anatin’ny andro vitsivitsy.
work from home dans Atsimondrano-BASY KILALAO NANAFIHANA TOKANTRANO
Navoakan’ny C.E.S ny lisitr’ireo kandidà filoham-pirenena ny faha-03 Mey 2013 araka ny fanapahan-kevitra n°01-CES/D ny 3 Mey 2013, ka niisa 41 ireo mpihazakazaka. Tsy neken’ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena anefa ny fisian’ireo kandida telo, dia ny amiraly ...Tohiny
work from home: Thanks for the post admin, I like your website.